wararka maanta-arlaadii.net » Shabaab oo Nin Iyo Xaaskiisa ku Dilay Deeganka Awdiinle ee Gobolka Bay
Dabley hubeysan oo ka tirsan Al Shabaab ayaa xalay fiidkii waxa ay Degmada Awdiinle ee Gobolka Baay ku dileen aabe iyo xaaskiisa, ka dib markii ay ku beegsadeen gurigooda xilligii afurka ka dib.
Raggan ayaa guriga ay daganaayeen aabahan iyo xaaskiisa ugu galay, ka dibna halkaasi ka soo saaray oo waxa ay ku toogteen afaafka hore ee guriga, sida Masuuliyiinta Maamulka Degmadaasi ay xaqiijiyeen.
Cali Xuseen Cali, Gudoomiyaha Degmada Awdiinle, ayaa sheegay labada ruux ee la dilay oo kala ahaa Aabe iyo xaaskiisa inay dileen Shabaab, wuxuuna sheegay dadkaasi inay ahaayeen dad ganacsato ah.
“Dadkaasi waxa ay ahaayeen dad ganacsato ah oo dukaanle ah iyaga oo xaafadooda aaday oo afuray oo xaafadooda jooga ayaa loo galay, laba qof oo isqabay ayeey ahaayeen, gurigooda hortooda ayaa laga dilay, carruur waa ay dhaleen, gabadha Hooyadeed ayaa haysa.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Degmada Awdiinle.
Gudoomiyaha ayaa sheegay ragga falkaan gaystay markii hore inay gargaraaceen guri ku dhegan guriga falka ay ka gaysteen, markii laga furi waayayna ay galeen hoygan oo furan, ka dibna ay dileen lamaanahaan.
Falkan oo ah mid argagax leh, sidoo kalena muujinaya mid ka fog bani’aadanimada ayaa waxaa si wayn u hadalhaya dadka deegaanka.
Al Shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxa ay wadeen falal kala duwan oo ay ku qalqa-lgelinayaan dadka ku nool magaalooyinka ay gacanta ku hayaan maamulada dalka ka dhisan iyo Dowladda Federalka Somaliya.
Madaxweynaha Mareekanka oo Ka Hadlay Weerarkii Baar Sanguuni ee Juubooyinka